Njanji yeBursa Njanji Haisi Yekukurumidza zvakare 'Yakakwirira' - RayHaber
mushaTURKEYDunhu reMarmara16 BursaNjanji yeBursa Njanji Haisi Yekukurumidza zvakare 'Yakakwirira'
Njanji yeBursa Njanji Haisi Yekukurumidza zvakare 'Yakakwirira'
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, Railway, GENERAL, Fast Train, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, TURKEY 0
njanji ye bursa haisisiri yakanyanya mwero
Manheru ken Kana uchitsvaga iyo TCDD webhusaiti, takazviwana isu pane 2019 Investment Chirongwa peji. Uyezve, takashamisika kuona iwo mashoko ari papeji.
TCDD General Directorate 1 Muna Nyamavhuvhu 2019 yakaita shanduro yechishanu pachirongwa chekudyara.
Kusvika nanhasi ...
Mune mamwe mazwi, zita reBandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, iro rakaverengerwa muchirongwa sechitima chekumhanya kusvika Nyamavhuvhu, rakachinjirwa kuHighlands Railway nekudzokorora.
tcdd purogiramu yekutsvaga mari
Pane zvakarongwa pasi ...
Iyo Ankara-Istanbul mutsara, iyo ichiri kuvakwa uye inosanganisira Kayaş-Ankara-Sincan, Sincan-Esenkent, Esenkent-Eskişehir, Eskişehir Station Kuyambuka, Eskişehir-İnönü, İnönü-Vezirhan, Vezirhan-Köseköy, Kösek. kumusoro.
Ankara-Sivas, Ankara-Polatli-Afyon-Usak-Manisa-Izmir uye mitsara yeJerkoy-Kayseri yakanyorwa mune yakakwira Yekumhanya Chitima chikamu.
Pasinei neizvi ...
Takabvunza avo vanoziva iri bhizinesi kuti zvinorevei kuchinja zita reOsmaneli-Bursa mutsetse Wekumusoro Yechikuru saiyo Yekumusoro Yechikara muchirongwa chekudyara.
Zvekare, mutengo wepamusoro wekuvakisa wechitima chakakwira zvakanyanya. Ivo vakati:
Yolcu Dzese dzinotakura vanhu chitima uye chitima chekutakura zvinhu zvichashanda pamutsetse weBursa. Naizvozvo, nzvimbo ino rave rakajairika mutsara kirasi. "
"Mutsetse uyu wakabuda mune yechitima chekumhanya-mhanya-yepamusoro uye wakabatanidzwa mune yechipiri, mutsetse wekare apo mitsetse dzekutakura vanhu dzinoshanda pamwe."
Munyaya iyi ...
Mune yakakwira High Railway chirongwa mukati mechikamu cheiyo yakajairwa inotarisirwa masikati nehusiku kutakura zvinotakura, ngoro yekumhanyisa yechitima inokwanisa kushanda pamwe neyakajairika mutyairi wengoro.
TCDD ichaita sarudzo kunoenderana nemamiriro ezuva uye kukwana kwekumhanya kwechitima chekumhanya kwasvika.
Kunyange zvakadaro | |
Kune tariro, hongu. Kuzadzika kwetariro iyoyo kunoenderana nesarudzo yesarudzo yezvematongerwo enyika.
3 bhiriyoni yekushandiswa yakashandiswa pa 2.1 bhiriyoni
1 yeTCDD General Directorate Maererano neiyo 2019 purogiramu yekudyara yakagadziridzwa muna Nyamavhuvhu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli High Standard Railway Project ine 180 kilometera mutsetse.
3, iyo yakaenzana yese, inofungidzirwa kuti inodhura TL miriyoni. Pane izvi, 1 bhiriyoni 940 mamirioni 508 zviuru mapaundi mu2018, 252 mamirioni 010 zviuru mapaundi akashandiswa mu2019, uye kushandiswa kwakazara kwasvika 2 mabhiriyoni 192 zviuru gumi zvemapaunzi.
Mutsetse weYenişehir-Osmaneli unovakwa zvakare uye mutsetse weBursa-Yenişehir uchaziviswa neiyo superstructure-electromechanical ithenda.
Mhinduro yekukurumidzira: Yakatorerwa tiketi nyoro zvakare mwedzi unotevera
Mumakoramu aya,… Takazivisa nemusi weMuvhuro uye nezuro kuti nyowani yemari inosvika 3 bhiriyoni 2018 mapaundi emamiriyoni e2 Kubvumbi 520 yeiyo yese yeBursa-Yenişehir mutsara wepamusoro uye mabasa emagetsi nemutsara weYenişehir-Osmaneli wakabviswa.
MunaJune 2018, thenda yakaziviswa, nekuda kwekuoma kwehupfumi hwenyika, mutengo wacho wakambopfuura 4 bhiriyoni mapaundi isati yatanga.
Hazvisi nyore kutakura kuwedzera kwakadaro. Naizvozvo, kondirakiti aisakwanisa kuendesa nzvimbo yacho, maitiro akaunza kubviswa kweiyo nyoro.
Nhau dzemhinduro yekukurumidza dzakabva kuSerbia.
AK Party Bursa mutevedzeri waDkt. Recep Tayyip Erdogan muBelgrade neAK Party. Mustafa Esgin kuvakwa kweTurkey kuti tisafunge kuti kuBelgrade-Sarajevo Highway Transportation Minister Cahit Turhan groundbreaking mhemberero akazarura nyoro kukanzura.
Kutevera kupindira kwaGurukota, akataura nezve kufambira mberi:
"Hapachazononoka, uye indasitiri yakadzimwa ichaitwa mwedzi unouya."
2 yeBursa chitima ine nzvimbo yekushanda
Muchokwadi, Bursa Expenditures yeBursa chitima, ine zita rakagadziridzwa sePamusoro Standard Railway muchirongwa chekudyara, zvakare inoratidza mamiriro ebhizinesi.
Iyo purogiramu, 2019 chete 252 mabhiriyoni 10 mapaundi emari pamashandisirwo anoonekwa, uye mamiriro aya anoratidzwa munzvimbo yekuvaka.
Kwakareba kwenguva yakareba, kwave paine kwekushongedza kongiri kuita chete paDemirtaş Viaduct uye munharaunda yeKazıklı yeRin Road. Anofamba nemushandi we4 achishandawo. (chiitiko - Ahmet Emin Yılmaz)
Zvinyorwa zve High High Railway Connection neEurope 11 / 06 / 2019 Zviratidzo zveHurumende yepamusoro yeCrovenne Connection neEurope: M. Cahit Turhan, Mutungamiri wekutakura uye Infrastructure, Halkalı- Mutoro unotakura simba reKapukule Railway Line, Çerkezköy-Kapıkule inowedzera zvikuru nekuvakwa kwebazi, European Union (EU) yekuvakwa kweprojekiti ichashandiswa 275 mamiriyoni eAmerica ichapedzwa nekupedzwa kweprojekti yakashuma kuti huwandu hwekubatana kwezvitima neveEurope huchazadzikiswa. Mutungamiri Turhan, Halkalı-Kapıkule Railway Line Project ÇerkezköyMukutaura kwake pamusangano wekusainira weKapukule Chikamu cheContract Construction, akati Havalimanı Havalimanı
Mutungamiri Altepe Haasi Kubudisa High-Speed ​​Tram, Kwete Tram zvakare (Vhidhiyo) 12 / 03 / 2013 Mutungamiri Altepe Iye zvino Tram Metro Kwete Kufambisa Chitoro Tinokura Bursa Mayor Recep ALTEPE, Konya anouya uye akuudze iwe purogiramu yako ... Teresi, Metro, Kwete Kufambisa Tsika Tinozvitengesa. Zvose Bursa nenyika yedu zvino zvinogona kubudisa zvinhu zvose kubva kumabhizimisi kusvika kumabhizimusi. Nyika yedu ine zvinangwa, saka tinofanira kuita masunharaunda uye hurumende dzenharaunda kuti dzigadzirise. Takataura munguva yekusarudzwa uye isu takazviita. Meya wedu maguta makuru emasasa akashanyira kuMeya Metropolitan Mayor Tehir Bey. Imotokari yedu yekutanga, kusanganisira software, yakwana. Akagamuchira gwaro rake mwedzi wapera uye anogona kupinda zvino kutengesa. Yedu yezvigadzirwa zvemagetsi ine R & D unit. Machine production Makine
Migwagwa yeChina uye mabhiriji makuru ezvitima ari kuwedzera nokukurumidza 07 / 11 / 2017 Kunyange zvazvo China iri muhutano hwekugadzirisa hutungamiri hunoenderana nekukura kwakakosha, iri kukurumidza kugadzirisa kutengesa kwenyika yekushambadzira. Iko mushure mutsva wegadziriro iyi yezvinoitwa mitsva ndiyo migwagwa mitsva uye yakakwirira-mitsara. China yakavaka zvikwereti zvinopfuura chikwi 800 mabhiriji makuru uye makiromita anopfuura chiuru ezvikwata zvezvitima zvepamusoro, 10 yakati, maererano nehurumende dzekutakura vatori veSvondo. Kutaura pamusangano wepamhenderekedzo yebhiriji wakaitirwa muWuhan, guta guru reHubei Province reChina, Zhou Wei, mukuru wevanjini veUnited Transport, akati pamagumo e2016, paiva ne 805 chikwi 300 bridges muChina. Maererano naZhou, ndeyendarira yakareba kupfuura yose ye 10 rop ılı
High-speed mota kuenda kuTrabzon kwete high-speed train 26 / 03 / 2016 Trabzon: Mutungamiri wePat Party weArab, Trabzon, Heydar Revi, Transport, Maritime Affairs uye Communications, vakasangana naBinali Yildirim. Revi, Trabzon, mapurojekiti ose akaenzana nemigwagwa, Gurukota rakakumbira ndokuudza. Ak Party Trabzon Sachigaro weHarare Chairman Haydar Revi, Ankara, achiita nhanho dzakawanda kuvane simba vane kodzero yemapurogiramu anokosha kuTrabzon. Rimwe remisangano iyi rakaitwa naVaMutungamiri wekutakura, Maritime Affairs uye Communications Binali Yildirim. Revi akati, ile We Takasangana naVaMutungamiriri Binali Yıldırım. Iyi musangano yaiperekedzwa neMapato, Metropolitan Mayor uye Gavhuna Imiz
Very high speed train auction | Ankara-Konya High-Speed ​​Train Line (6) yakakura kwazvo motokari yakagadziriswa ithenda 16 / 11 / 2012 Very mukuru-nokukurumidza nechitima nyoro: Ankara-Konya High Speed ​​Railway Line kuna 6 Total chaizvo mukuru-nokukurumidza nechitima yakatarwa kutenga ari munyoro, kusanganisira 4 yakasimba yaipa, apo China akasvika boka kubva Cnr pamwe makwikwi yepasisa mamiriyoni 263 510 zviuru 757 kuita. The Republic of Turkey State Railways (TCDD) General Directorate, Ankara-Konya High Speed ​​Train (YHT) kusangana kukura kudiwa mumutsara uye nhamba 6 vawanze nhamba Flights chaipo mukuru-nokukurumidza nechitima yakatarwa kutenga ari munyoro, kusanganisira 4 yakasimba yaipa, ukuwo mutsara Chipo chacho chakabva kuChina chinhambwe CNR ne 263 mamiriyoni 510 zviuru gumi zvemadhora 757. TCDD, Ankara-Konya CD
Maitiro Ekuwedzera anopesana neIETT Metrobus Tsaona
Zvinyorwa zve High High Railway Connection neEurope
Mutungamiri Altepe Haasi Kubudisa High-Speed ​​Tram, Kwete Tram zvakare (Vhidhiyo)
Migwagwa yeChina uye mabhiriji makuru ezvitima ari kuwedzera nokukurumidza
High-speed mota kuenda kuTrabzon kwete high-speed train
Very high speed train auction | Ankara-Konya High-Speed ​​Train Line (6) yakakura kwazvo motokari yakagadziriswa ithenda
High speed yenhema muBursa
High Speed ​​Speed ​​Rinoguma nehafu Pamberi kweBursa
Haisisiri Chishanu, Menderes
Haikwanise kutaura nemaserura muIstanbul Metro
Kuzadza pasi hakuchina 3 pounds